मध्यभोटेकोशीको आईपीओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ? Bizshala -
मध्यभोटेकोशीको आईपीओमा पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । आयोजना प्रभावित र सिन्धुपाल्चोकका अन्य क्षेत्रका बासिन्दाका लागि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा पहिलो दिन ०.०२२ प्रतिशतमात्र खरिद आवेदन परेको छ।
कम्पनीले आजबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुल ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको छ। आज यो आईपीओमा प्रभावित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका गरी कुल ६०१ आवेदकबाट १ लाख ३० हजार २८० कित्ता खरिद आवेदन परेको छ। जुन कुकल कित्ताको ०.०२२ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ।
आज बैंकिङ समयसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ६४ आवेदकले २० हजार ३०० कित्ता खरिदका लागि आवेदन परेका छन्। यो प्रभावित क्षेत्रका छुट्याइएको कुल कित्तामध्ये ०.११ प्रतिशतमात्र आवेदन परेको हो।
यसैगरी प्रभावित क्षेत्रबाहेक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका ५३७ आवेदकबाट कुल १ लाख ९ हजार ९८० कित्ताका लागि खरिद आवेदन परेको छ। जुन अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कुल कित्तामध्ये ०.२६ प्रतिशतमात्र आवेदन परेको छ।